Author: Rebecca Siggers
Abụ m onye edemede na onye na-ede blogger. Ide ihe na - enyere m aka ịmara, usọ & nghota banyere otutu ulo oru. Enwere m mmasị ide na ịkekọrịta ihe ọmụma m kachasị na mostlylọ Ọrụ Njem, Ekwere m na njem bụ isi maka ndụ udo ka m na-agbasa nkwenye m n'ofe ụwa. Ewepu ede ihe, Enwere m mmasị iji akwụkwọ na Njem na Ọgụgụ - Ị nwere ike pịa ebe a iji ịkpọtụrụ m
6 Ndụmọdụ Savvy Iji Mee atụmatụ Njikọ Ọgbakọ Na Mmefu Ego
site Rebecca Siggers
Oge Ọgụgụ: 6 nkeji Ekwesiri ekwenye na njem bụ otu ihe ịzụtara ka ọ bụrụ ma ọ bụ nwee afọ ojuju! Ọ naghị adị mkpa mgbe niile na ị ga-ewepụ ego gị tara ahụhụ na-eri iji kpata akụnụba ahụ. Mgbe na-ezube anwa anwa anwu na-susuru ọnụ…